Sida loo Edit Video dhalaalka s
> Resource > Video > Sida loo Edit Video dhalaalka
Mararka qaarkood waxa aad ka heli kartaa in markii rasaasta video guriga iftiinka xun ama ka dhanka ah qorraxda, waxa ay u muuqataa inay aad u madow ama suuxay. Dhab ahaantii, waxaad si fudud u fududeeyo kartaa video by dhalaalka video isticmaalaya sixiddiisa Filmora Wondershare (asal ahaan Wondershare Video Editor) . Haddaba maqaalkan, waxaad ku baran doontaa sida loo sameeyo si fudud u hagaajin loo baahdo sidaas hagaajinta video mugdi ah waxaa la. Waxaad marka hore kala soo bixi kartaa barnaamijka ka dibna raac tallaabooyinka hoose.
1 dejinta aad video
Ka dib markii socda Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor), riix "Import" badhanka si ku eegaan iyo dajiyaan aad video barnaamijka. Waxa kale oo suurto gal ah in si toos ah jiidi jeedi video xagga daaqaddii hoose. Markaas jiidi oo hoos u video bartilmaameedka in waqtiga loo qabtay tafatirka.
2 Edit video dhalaalka
Double guji video ah oo u baahan tafatirka, ka dibna suuqa kala Video ayeey la furay, halkaas oo aad qabsato karaa goobaha qaar ka mid ah video. Ka mid ah, Nuurkii waxaa loo isticmaalaa in astaysto fudaydkii guud ama gudcur aad video image. Goob Tani waxay kuu ogolaanaysaa inaad u samaysaa hagaajin fudud oo si kala duwan ee farqiga ah ee video.
Si aad xaalkaa dhalaalka video ah, si toos ah aad dulqabo mouse in tusiyaha, wayna dhaqaaqi bidix ama midig ay weheliyaan slider ah. Ka dib markii la sii daayo badhanka mouse bidix, qiimaha kala la dejin doonaa. Isla markiiba waxaad ka arki kartaa natiijada uu furmo suuqa Xiisaha Leh. Haddii aadan jeclaan natiijada, waxaad had iyo jeer guji kartaa "Dib u celi" button inta ay socoto in ay dib wax goob ay qiimaha asalka ah.
Talo: Si loo gaaro natiijada ugu fiican, waxa kale oo aad ka bedel kartaa "ka duwan" dejinta in la beddelo kala duwan yihiin midabka iyo iftiin ee qaybaha kala duwan ee image video ah.
3 Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh iyo dhoofin video ah saxar ah
Ka dib markii ay wax walba waxaa loo sameeyaa si ay u xaalkaa dhalaalka video, waxaad ku eegaan karo faylka saxar ah si loo hubiyo in aad heshay natiijada loo baahan yahay. Si tan loo sameeyo, kaliya riix "Play" badhanka si ay u bilaabaan loo maqli ka.
Haddii aad tahay gebi ahaanba ku qanacsaneyn natiijada, riix "Abuur" button iyo badbaadin faylka saxar video mid ka mid ah qaabab ay taageerayaan galay ee "Qaabka" tab. Waxaad kaloo dooran kartaa "Device" tab si ay u abuuraan video ah ciyaaryahanka mobile ah, telefoonka gacanta ama Console ciyaaraha idinkaa iska leh ee ah. Waxa kale oo aad xitaa si toos gali kartaa video ay u YouTube ama Facebook ee "YouTube" tab ama gubi in DVD haddii aad rabto.
Top 20 Best Source Helo Music Background u Videos (Free Download)